चुनावको पहिलो चरणमा इमरान खानको पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरिन्दै - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय चुनावको पहिलो चरणमा इमरान खानको पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरिन्दै
चुनावको पहिलो चरणमा इमरान खानको पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरिन्दै
स्थानीय चुनावको पहिलो चरणमा इमरान खानको पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हारको दोष आफ्नै उम्मेदवारलाई दिएका छन् र गलत उम्मेदवार छनोटका कारण पीटीआई हारेको बताएका छन्। यसै क्रममा विपक्षी दलका नेता मरियम नवाजले भनेकी छिन् कि जनता इमरान खान सरकारसँग असन्तुष्ट छन् र सरकारलाई बदनाम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय चुनावमा इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई)लाई ठूलो झट्का लागेको छ । आफ्नो गढ मानिने खैबर पख्तुनख्वामा स्थानीय चुनावमा पार्टीले पराजय बेहोरेको छ । पेशावर (खैबर पख्तुनख्वाको राजधानी) को मेयर पदका लागि भएको निर्वाचनमा जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) ले जित हासिल गरेको छ। खैबर पख्तुनख्वा राज्यमा आदिवासी जिल्लाहरू विलय भएपछि यो पहिलो चुनाव थियो जहाँ पीटीआईले हार बेहोरेको थियो।
पीटीआईका उम्मेदवार ठूलो मतान्तरले पराजित भएका छन्
पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्युन’ले अनौपचारिक र अप्रमाणित नतिजाको आधारमा यो जानकारी दिएको हो । स्थानीय चुनावको पहिलो चरणमा अधिकांश क्षेत्रमा पीटीआईले स्तब्ध हार बेहोरेको छ । पीटीआईले पेशावरको मेयरको सिट JUI-F सँग ठूलो अन्तरले पराजित गर्यो।
अनौपचारिक स्रोतहरूका अनुसार JUI-F पार्टी प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानका नातेदार जुबैर अलीले ६२,३८८ मत प्राप्त गरे। उनले पीटीआईका उम्मेदवार रिजवान बंगसलाई करिब ११ हजार ५ सय मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन् । रिजवान बंगसले ५० हजार ६ सय ६९ र पीपीपीका जारक अरबाबले ४५ हजार मत पाएका छन् ।
हारमा के भने इमरान खान ?
खैबर पख्तुनख्वामा पीटीआईको पराजयमा इमरान खानको प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छ । उनले पीटीआईले गल्ती गरेको भन्दै सजाय पाएको बताएका छन् । आफ्नो एउटा ट्वीटमा इमरान खानले लेखेका छन्, ‘खैबर पख्तुनख्वामा स्थानीय चुनावको पहिलो चरणमा हामीले गल्ती गर्‍यौं र मूल्य पनि चुकाउनुपर्यो । गलत उम्मेदवार छनोट नै हाम्रो हारको सबैभन्दा ठूलो कारण बनेको छ । अबदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा म आफैं नजर राख्छु । इन्शाल्लाह पीटीआई जितेर आउनेछ।
केपी एलजी चुनावको पहिलो चरणमा पीटीआईले गल्ती गर्यो र मूल्य चुकायो। गलत उम्मेदवार छनोट प्रमुख कारण थियो। अब देखि म व्यक्तिगत रूपमा केपी एलजी चुनावको दोस्रो चरण र पाकिस्तानभर एलजी चुनावमा PTI को एलजी चुनाव रणनीतिको निरीक्षण गर्नेछु।इन्शाअल्लाह पीटीआई बलियो हुनेछ
यो चुनावले विपक्षीलाई हौसला दिनेछ
अनौपचारिक नतिजा अनुसार, JUI-F 20 सिटको साथ अगाडि छ, त्यसपछि सत्तारूढ पीटीआई (15), अवामी नेशनल पार्टी (7), पीएमएल-एन (3), जमात-ए-इस्लामी (2) र पीपीपी (1) लाई सिटमा उनीहरूको अग्रता कायम राखेको छ। सत्तारुढ पीटीआईको गढ मानिएको खैबर पख्तुनख्वामा स्थानीय चुनावको नतिजा इमरान खान सरकारका लागि चिन्ताको विषय हो । योसँगै विपक्षी दलका लागि पनि यी निर्वाचन उत्साहजनक छन् ।
खैबर पख्तुनख्वामा पार्टीको वृद्धिबाट उत्साहित मौलाना फजलुर रहमानले भने कि स्थानीय चुनावले फेरि एक पटक आफ्नो पार्टी राज्यको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो भनेर प्रमाणित गरेको छ। सोमबार क्वेटामा बलुचिस्तानका पूर्व मुख्यमन्त्री अस्लम रायसानीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा फजलुर रहमानले इमरान खानको खिल्ली उडाउँदै पार्टीको सरकार वैध नभएर “चयनित सरकार” भएको दोहोर्‍याए।
उनले सबै राज्यमा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) का नेता तथा पदाधिकारीहरुसँग सरकारविरुद्धको मार्चको तयारीका लागि बैठक बसिरहेको बताए । पाकिस्तान लोकतान्त्रिक आन्दोलन सन् २०२० मा गठन भएको ११ राजनीतिक दलहरूको मोर्चा हो। यसका नेताहरूले इमरान खानलाई ‘सेनाको कठपुतली’ ठान्छन्।
मरियम नवाजले इमरान खानलाई निशाना बनाएकी छन्
पीएमएल-एनकी उपाध्यक्ष मरियम नवाजले यी नतिजालाई लिएर इमरान खानलाई निशाना बनाएकी छन् । उनले सरकारले गरेको परिवर्तनको वाचालाई आक्रोशपूर्ण ढंगले तोडिएको बताए । मरियम नवाजले आफ्नो एक ट्वीटमा पीटीआईको चुनावी नाराको लाइनमा लेखेकी छिन्, ‘तबदिली आ नही रही है, परिवर्तन आ गई है’।
उनले आफ्नो ट्विटमा थप लेखेका छन्, ‘सरकारले देशका २२ करोड जनतालाई मुद्रास्फीति र अराजकताको खाडलमा धकेलेको छ, जसका कारण जनताले सरकारलाई बकवास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हिंसा धेरै भएको छ । श्वबी, बन्नु र दारा आदमका खेलहरूमा भएको हिंसालाई ध्यानमा राख्दै आइतबारको चुनाव स्थगित गरिएको थियो।
तर, पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा ६४ तहसील र १७ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो । 64 तहसीलहरू मध्ये, मौलाना फजलुर रहमानको JUI-F 20 तहसील अध्यक्ष पदहरूमा अगाडि थियो, जबकि पीटीआई 15 सिटमा पछाडि थियो।
स्थानीय निर्वाचनमा पनि अवामी नेसनल पार्टीले ९ सिट कब्जा गरेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले एउटा सिट पनि पाउन सकेनन् । पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) ले ३ सिट, जमात–ए–इस्लामीले २ सिट जितेका छन् भने पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी, तेहरिक–ए–इलाहत र मजदूर किसान पार्टीले १–१ सिट जितेका छन् ।
पीटीआईले पेशावरका ७ तहसीलमध्ये एउटा मात्र सिट जितेको छ । अर्कोतर्फ जुआइ–एफले ३ र एएनपीले २ सिट जितेको छ ।अप्रमाणित नतिजा अनुसार पीटीआईले मर्दानमा एउटा सिट जित्न सकेको छैन। योसँगै तीन तहसीलमा जेयूआई–एफका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एएनपीले मर्दानका दुई तहसील पनि कब्जा गरेको छ।
Previous articleस्थिरता निम्तिने आशंकाका बिच, पश्चिमा देशहरुमा चिनीया त्रास !
Next articleचिनले पारित गरेको भूमि सीमा कानून ,विस्तारवादी नीतिको नयाँ स्वरूप